ဒီနှစ် ဆောင်းမှာ အပြတ်လန်းနိုင်ဖို့အတွက် Jacket ဖက်ရှင်(၈) မျိုး - For her Myanmar
ဒီနှစ် ဆောင်းမှာ အပြတ်လန်းနိုင်ဖို့အတွက် Jacket ဖက်ရှင်(၈) မျိုး
ခရီးထွက်စရာ ရှိနေတာနဲ့ အတော်ပဲ… သွားဝယ်တော့မယ်လေ…
သိပ်မကြာခင်မှာ ဆောင်းတွင်းကို ရောက်တော့မှာ ဆိုတော့ ဆောင်းနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ဖက်ရှင်လေးတွေ အကြောင်း စဉ်းစားထားပြီးကြပြီလား ယောင်းယောင်းတို့ရေ။ အမှန်တော့ သိပ်မကြာခင်တောင် မဟုတ်ဘူးနော်.. ခုဆို ဒီဇင်ဘာထဲမှာဆိုတော့ ဆောင်းတွင်း ဝင်နေပြီရယ်.. 😀 ဆိုပေမဲ့ ရန်ကုန်ဆောင်းက အရမ်းမအေးဘူးဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အထာကျကျ ရှိုးထုတ်လို့ ကောင်းမယ့် ဂျက်ကက်(Jacket) ဖက်ရှင်လေးတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်က အေးတဲ့နေရာတွေကို ခရီးသွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်မှမသွားဘဲ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hang Out လုပ်ရင်း ရှိုးထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်မယ့် ဂျက်ကက်ဖက်ရှင်လေးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့…
ဒါကတော့ ခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့ အထာကျကျ လန်းလို့အကောင်းဆုံး ဂျက်ကက်မျိုး ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ကတည်းက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Bomber Jacket တွေက ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားဘဲ အမြဲခေတ်စားနေမယ့် သဘောမှာ ရှိပါတယ်။ Bomber Jacket တွေကို basic tee တစ်ထည်နဲ့ ဘောင်းဘီရှည် အတွဲအဆက်ပေါ်က ထပ်ဝတ်နိုင်သလို ကြိုးတစ်ချောင်းဂါဝန်ရှည်လေးတွေပေါ်က ထပ်ဝတ်ပြီး ရှိုးထုတ်လို့လည်းရတယ်လို့ အကြံပေးပါရစေနော်။
ပေါ့ပါးပြီး လွတ်လပ်တဲ့စတိုင်ဖြစ်စေတဲ့ ဂျင်းဂျက်ကက်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉ရာစုကတည်းက ခေတ်စားခဲ့ပြီး ဒါတွေကိုတော့ Denim Jacket တွေလို့ အခေါ်များကြပါတယ်။ ဒီ ဂျက်ကက်တွေကလည်း ဒီနှစ်ဆောင်းမှာလည်း ထပ်ပြီးခေတ်စားနေဦးမှာပါပဲ။ အပြာရောင်ဂျင်း (Blue Denim) တွေက Classic (ဂန္ထဝင်ဆန်) ဖြစ်စေပြီး အရောင်မွဲမွဲ အနက်ရောင်ဂျင်း (matte black) Denim တွေကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုခေတ်စားလာပြီး အတွေ့ရများလာပါတယ်။
3. Button-front coat
ဒီလို ဂျက်ကက်မျိုးကျတော့ ခရီးသွားဖက်ရှင်နဲ့ ပိုပြီး လိုက်ဖက်မယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာပဲ ဝတ်ချင်တဲ့ယောင်းတို့ကတော့ အသားပါးတာမျိုး ရှာဝတ်နိုင်ပါတယ်နော်။ ရှေ့ မှာ ကြယ်သီးလေး ၄လုံးနဲ့ စတိုင်ကျတဲ့ ဒီကုတ်လေးကို ဆောင်းတွင်းမှာ ဝတ်ဖို့စဉ်းစားထားရင်တော့ ဆောင်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးအရောင်က ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့ “Mustard Yellow” အရောင်လေးပါတဲ့။
Moto Jacket တွေဆိုတာက Denim Jacket (ဂျင်းဂျက်ကက်)တွေနဲ့ ပုံစံချင်းတူပြီး အသားပဲ ကွာသွားတာပါ။ သူ့ကို အဓိက သားရေ (Leather) နဲ့ Faux-shearling လို့ ခေါ်တဲ့ လက်နဲ့ကော စက်နဲ့ပါ လျှော်လို့ရတဲ့ ပလတ်စတစ်သားလိုမျိုး နဲ့ ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ ညဘက် night out တာတွေ၊ ရှိုးပွဲတွေသွားတဲ့အခါ Moto Jacket တွေကလည်း ရှိုးထုတ်လို့ ကောင်းတဲ့ ဖက်ရှင်တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Plaid tweed jacket
သိုးမွေးနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားပြီး အစက်အပြောက် ရောင်စုံအဆင်လေးတွေ၊ အကွက် အဆင်ရောင်စုံလေးတွေ နဲ့ လည်ပင်းတို့ အင်္ကျီ အောက်ခြေတို့မှာ အဖွားဖွားလေးတွေ၊ အမြိတ်လေးတွေ ပါတဲ့ Plaid Tweed Jacket လေးတွေကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဂျက်ကက်ဖက်ရှင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
Related Article >>> ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Paper-Bag Pants ဆိုတာ ဘာလဲ…ဘယ်လို ဖက်ရှင်ကျအောင် ဝတ်မလဲ …
6. Something pink
ဒါကတော့ Jacket ဖက်ရှင်ထက် အရောင်ရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာ ဘာရွေးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေရင် ‘ပန်းရောင်’ ကိုသာ ရွေးလိုက်ပါလို့ အကြံပေးတာပါ ယောင်းရေ။ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ ဖက်ရှင်က ဆောင်းအေးအေးလေးမှာ ထင်းခနဲ ပေါ်လွင်လှပနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။
ဘလေဇာကုတ် တွေက ဖက်ရှင် ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းမှာ အနည်းဆုံး တစ်ထည်စီလောက်တော့ ရှိထားကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်.. ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုး ဘလေဇာ ကုတ်တွေနဲ့ စာရင် ကတ္တီပါစနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ ဘလေဇာကုတ်တွေက ဆောင်းရဲ့ အငွေ့အသက်နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်ပြီး ဝတ်ရတဲ့အခါမှာလည်း သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လှနေစေမှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
8. Long plaid coat
ယောင်းတို့တော့ သတိထားမိမလား မသိဘူး။ ဒီနှစ်ဆောင်းမှာ နိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ရှိုးတွေရော၊ Megan တို့ ဆီမှာပါ ဒီ plaid coat တွေ အတွေ့ရများနေတယ်နော်။ Megan ကတော့ ဒီ ဆောင်းတွင်း ဂျက်ကက်ဖက်ရှင်ထဲမှာ ဒီ ဖက်ရှင်ကို သဘောအကျဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီ Plaid Coat တွေက ဘောင်းဘီ နဲ့ ကုတ် တစ်ဆက်တည်းတွဲထားတာလေးတွေလည်း ခေတ်စားနေတာမို့ Megan ကတော့ “မရတော့ဘူး အရမ်းကို စမ်းဝတ်ကြည့်ချင်နေပါပြီနော်”ဆိုတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါပြီ 😀 Plaid Coat လေးတွေရဲ့  ကိုယ်စားပြု စကားလုံးလေးကလည်း “ခေတ်မီဆန်းပြားသော” တဲ့လေ။
ကဲ … ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ဆောင်းမှာ ဘယ်ဂျက်ကက်ကို ဝတ်ကြမလဲဆိုတာ အတွေးပေါ်လောက်ပြီနဲ့ တူပါရဲ့နော်…
References: Liveabout, Purewow , Instyle
ခရီးထှကျစရာ ရှိနတောနဲ့ အတျောပဲ… သှားဝယျတော့မယျလေ…
သိပျမကွာခငျမှာ ဆောငျးတှငျးကို ရောကျတော့မှာ ဆိုတော့ ဆောငျးနဲ့လိုကျဖကျမယျ့ ဖကျရှငျလေးတှေ အကွောငျး စဉျးစားထားပွီးကွပွီလား ယောငျးယောငျးတို့ရေ။ အမှနျတော့ သိပျမကွာခငျတောငျ မဟုတျဘူးနျော.. ခုဆို ဒီဇငျဘာထဲမှာဆိုတော့ ဆောငျးတှငျး ဝငျနပွေီရယျ.. 😀 ဆိုပမေဲ့ ရနျကုနျဆောငျးက အရမျးမအေးဘူးဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အထာကကြ ရှိုးထုတျလို့ ကောငျးမယျ့ ဂကျြကကျ(Jacket) ဖကျရှငျလေးတှအေကွောငျး ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။
ကိုယျက အေးတဲ့နရောတှကေို ခရီးသှားမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျမှမသှားဘဲ ရနျကုနျမွို့ထဲမှာပဲ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Hang Out လုပျရငျး ရှိုးထုတျဖို့ဖွဈဖွဈ သငျ့တျောမယျ့ ဂကျြကကျဖကျရှငျလေးတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲဆိုတော့…
ဒါကတော့ ခတျေဆနျဆနျနဲ့ အထာကကြ လနျးလို့အကောငျးဆုံး ဂကျြကကျမြိုး ပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ကတညျးက တှခေဲ့ရတဲ့ Bomber Jacket တှကေ ဘယျတော့မှ ရိုးမသှားဘဲ အမွဲခတျေစားနမေယျ့ သဘောမှာ ရှိပါတယျ။ Bomber Jacket တှကေို basic tee တဈထညျနဲ့ ဘောငျးဘီရှညျ အတှဲအဆကျပျေါက ထပျဝတျနိုငျသလို ကွိုးတဈခြောငျးဂါဝနျရှညျလေးတှပေျေါက ထပျဝတျပွီး ရှိုးထုတျလို့လညျးရတယျလို့ အကွံပေးပါရစနေျော။
ပေါ့ပါးပွီး လှတျလပျတဲ့စတိုငျဖွဈစတေဲ့ ဂငျြးဂကျြကကျတှကေ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၉ရာစုကတညျးက ခတျေစားခဲ့ပွီး ဒါတှကေိုတော့ Denim Jacket တှလေို့ အချေါမြားကွပါတယျ။ ဒီ ဂကျြကကျတှကေလညျး ဒီနှဈဆောငျးမှာလညျး ထပျပွီးခတျေစားနဦေးမှာပါပဲ။ အပွာရောငျဂငျြး (Blue Denim) တှကေ Classic (ဂန်ထဝငျဆနျ) ဖွဈစပွေီး အရောငျမှဲမှဲ အနကျရောငျဂငျြး (matte black) Denim တှကေတော့ ခုနောကျပိုငျးမှာ ပိုခတျေစားလာပွီး အတှရေ့မြားလာပါတယျ။
ဒီလို ဂကျြကကျမြိုးကတြော့ ခရီးသှားဖကျရှငျနဲ့ ပိုပွီး လိုကျဖကျမယျ့ ပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။ ရနျကုနျမှာပဲ ဝတျခငျြတဲ့ယောငျးတို့ကတော့ အသားပါးတာမြိုး ရှာဝတျနိုငျပါတယျနျော။ ရှမှေ့ာ ကွယျသီးလေး ၄လုံးနဲ့ စတိုငျကတြဲ့ ဒီကုတျလေးကို ဆောငျးတှငျးမှာ ဝတျဖို့စဉျးစားထားရငျတော့ ဆောငျးနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးအရောငျက ပုံထဲမှာ ပွထားတဲ့ “Mustard Yellow” အရောငျလေးပါတဲ့။
Moto Jacket တှဆေိုတာက Denim Jacket (ဂငျြးဂကျြကကျ)တှနေဲ့ ပုံစံခငျြးတူပွီး အသားပဲ ကှာသှားတာပါ။ သူ့ကို အဓိက သားရေ (Leather) နဲ့ Faux-shearling လို့ ချေါတဲ့ လကျနဲ့ကော စကျနဲ့ပါ လြှျောလို့ရတဲ့ ပလတျစတဈသားလိုမြိုး နဲ့ ခြုပျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဆောငျးတှငျးမှာ ညဘကျ night out တာတှေ၊ ရှိုးပှဲတှသှေားတဲ့အခါ Moto Jacket တှကေလညျး ရှိုးထုတျလို့ ကောငျးတဲ့ ဖကျရှငျတခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
သိုးမှေးနဲ့ ခြုပျလုပျထားပွီး အစကျအပွောကျ ရောငျစုံအဆငျလေးတှေ၊ အကှကျ အဆငျရောငျစုံလေးတှေ နဲ့ လညျပငျးတို့ အင်ျကြီ အောကျခွတေို့မှာ အဖှားဖှားလေးတှေ၊ အမွိတျလေးတှေ ပါတဲ့ Plaid Tweed Jacket လေးတှကေတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကောငျမလေးတှနေဲ့ လိုကျဖကျမယျ့ ဂကျြကကျဖကျရှငျလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
Related Article >>> ဒီနှဈပိုငျးမှာ ခတျေစားနတေဲ့ Paper-Bag Pants ဆိုတာ ဘာလဲ…ဘယျလို ဖကျရှငျကအြောငျ ဝတျမလဲ …
ဒါကတော့ Jacket ဖကျရှငျထကျ အရောငျရှေးခယျြတဲ့ အခါမှာ ဘာရှေးရမှနျးမသိ ဖွဈနရေငျ ‘ပနျးရောငျ’ ကိုသာ ရှေးလိုကျပါလို့ အကွံပေးတာပါ ယောငျးရေ။ ပနျးရောငျဖြော့ဖြော့ ဖကျရှငျက ဆောငျးအေးအေးလေးမှာ ထငျးခနဲ ပျေါလှငျလှပနမှော ဖွဈပါတယျတဲ့နျော။
ဘလဇောကုတျ တှကေ ဖကျရှငျ ခဈြမွတျနိုးသူတိုငျးမှာ အနညျးဆုံး တဈထညျစီလောကျတော့ ရှိထားကွမယျ ထငျပါတယျနျော.. ဒါပမေဲ့ ရိုးရိုး ဘလဇော ကုတျတှနေဲ့ စာရငျ ကတ်တီပါစနဲ့ ခြုပျထားတဲ့ ဘလဇောကုတျတှကေ ဆောငျးရဲ့ အငှအေ့သကျနဲ့ ပိုလိုကျဖကျပွီး ဝတျရတဲ့အခါမှာလညျး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ လှနစေမှောပါ ယောငျးတို့ရေ…
ယောငျးတို့တော့ သတိထားမိမလား မသိဘူး။ ဒီနှဈဆောငျးမှာ နိုငျငံတကာဖကျရှငျရှိုးတှရေော၊ Megan တို့ ဆီမှာပါ ဒီ plaid coat တှေ အတှရေ့မြားနတေယျနျော။ Megan ကတော့ ဒီ ဆောငျးတှငျး ဂကျြကကျဖကျရှငျထဲမှာ ဒီ ဖကျရှငျကို သဘောအကဆြုံး ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီ Plaid Coat တှကေ ဘောငျးဘီ နဲ့ ကုတျ တဈဆကျတညျးတှဲထားတာလေးတှလေညျး ခတျေစားနတောမို့ Megan ကတော့ “မရတော့ဘူး အရမျးကို စမျးဝတျကွညျ့ခငျြနပေါပွီနျော”ဆိုတဲ့ အခွအေနရေောကျနပေါပွီ 😀 Plaid Coat လေးတှရေဲ့ ကိုယျစားပွု စကားလုံးလေးကလညျး “ခတျေမီဆနျးပွားသော” တဲ့လေ။
ကဲ … ဒါဆိုရငျတော့ ဒီနှဈဆောငျးမှာ ဘယျဂကျြကကျကို ဝတျကွမလဲဆိုတာ အတှေးပျေါလောကျပွီနဲ့ တူပါရဲ့နျော…
Tags: coat, Fashion, Jacket, Style, wear, Winter
ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင်တော့ အလတ်ဖြစ်ရတာကို စိတ်ညစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး...